ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်တိုင်းတွင် တရားဝင် ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ရရေး တောင်းဆိုလက်မှတ်မျ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်တိုင်းတွင် တရားဝင် ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ရရေး တောင်းဆိုလက်မှတ်မျ??
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မည်သည့်မြို့နယ်တွင်မဆို တရားဝင်ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ရရေး တောင်းဆို လက်မှတ်များကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဥပဒေနှင့်အညီ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့် တရားဝင်ရရှိရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ကို မေ ၅ ရက်က တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ လှော်ကားလမ်းဘေးရှိ (၅၆) နှင့် (၇ဝ)ရပ်ကွက်ကြား ကွင်းပြင်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မည် သည့်မြို့နယ်တွင်မဆို တရားဝင် ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ရရှိလျှင် ယာဉ် ကြောကျပ်တည်းမှု ဖြေလျှော့နိုင် ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာနိုင် ခြင်းစသည့်ရလဒ်များ ထွက်ပေါ် လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လက် မှတ်ရေးထိုးပွဲ ဦးဆောင်သူဦး ကျော်လွင်ဦးက ဒီမိုကရေစီတူဒေး သို့ပြောသည်။
”ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်မရတဲ့အခါ မှာ ပြည်သူတွေကခေါင်းစဉ်အမျိုး မျိုးအောက်ကနေ ဖမ်းတဲ့အခါမှာ ပိုက်ဆံတွေပေးပြီး ဒုက္ခတွေရောက် ရတာပေါ့ဗျာ။ လက်မှတ်တွေရရင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရယ်၊ ပြီးရင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို လက် မှတ်တွေနဲ့အတူတင်ပြပြီး တရား ဝင်ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ရရေးကိုတောင်း ဆိုမယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ ဒဂုံလေးမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင် သာယာ အစရှိသည့်မြို့နယ်များအ ပြင် အခြားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးအတွင်းရှိ စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြ ကြောင်း တောင်ဒဂုံ (၇ဝ) ရပ်ကွက် မှ ဦးနေလင်းက ပြောသည်။
”အစိုးရကလည်း တရားဝင် စီးနင်းခွင့်ပြုပေးလိုက်ရင် ကျွန် တော်တို့ စီးတဲ့သူတွေဘက်ကလည်း ပဲစည်းကမ်းတကျ စီးနင်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယခုနှစ် မတ်လ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)၊ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက် ပိုင်း)၊ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းနှင့် ဒဂုံဆိပ် ကမ်းမြို့နယ်တို့တွင် ဆိုင်ကယ်စီး နင်းနေသူများထံမှ တရားဝင်ဆိုင် ကယ်စီးခွင့် ရရှိရေးလက်မှတ်များ လိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ရာ လက်မှတ်ရေး ထိုးသူ ၆ဝဝရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထိုလက်မှတ်၆ဝဝကိုသက်ဆိုင် ရာအစိုးရအဖွဲ့များထံ တင်ပြခဲ့ပြီးမ ကြာခင်ခရိုင်ရုံးများမှ တာဝန်ရှိသူ များက လက်မှတ်တင်ပြသူများကို ခေါ်ယူကာ တောင်းဆိုလိုသည့်အချက်များအား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ယခုပြုလုပ်သော လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲသည် ဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်ပြီးယင်းပွဲအတွက် သက်ဆိုင် ရာမှ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး လက်မှတ်စုစုပေါင်း ၆ဝဝ ကျော် ထပ်မံကောက်ခံရရှိကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်စည်ပင် နယ်နိမိတ်အ တွင်းရှိ မြို့နယ်အများစုတွင် ဆိုင် ကယ်စီးနင်းခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထား သော်လည်း ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်များ၌ တရားမဝင်ဆိုင်ကယ် စီးနင်းနေမှု များမှာ တရားဝင်သဖွယ်ဖြစ်နေ သည်။